China Voice:Tele Information Technology, အာကာသ ေလယာဥ္ႏွင့္ ဇီဝနည္းပညာ - Pandaily
China Voice:Tele Information Technology, အာကာသ ေလယာဥ္ႏွင့္ ဇီဝနည္းပညာ
Aug 12, 2021, 18:48ညနေ 2021/08/12 20:07:07 Pandaily
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က Windsays News:China Telematics ကုမ္ပဏီကြီး Pateo က တရုတ်ယွမ် ၈.၃ သန်းကို ကြီးမားတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ရရှိခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းအတွက် ကူညီလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ Space Flight Product Product Product Procedure ကုမၸဏီက ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ အသံထက္ျမန္ေသာ အာကာသေလယာဥ္မ်ား; ရှန်ဟိုင်းအခြေစိုက် သွေးခုန်နှုန်းဆေးပညာ ပုံရိပ်မြှင့်တင်ရေး နည်းပညာကုမ္ပဏီဟာ ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ကျော် အကုန်အကျခံ တည်ဆောက်နေတဲ့ ဗိုက်ဘာကုမ္ပဏီကို သုတေသနပြုဖို့ အရှိန်မြှင့်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
Telematics Telematics က Pateo rakes ဟာ Baw Group အတြက္ ဘီးေပါက္မဲ သန္း ၈၃၀ ကို
China Telematics ကို ကိုင်တွယ်တာတွေကို ရှန်ဟိုင်းက Patel Electronic Device Manufacturing Company Limited က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကကြေညာခဲ့ပြီး တရုတ်အစိုးရပိုင် ကားထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းစု(China FAW Group) က အသစ်ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ဘဏ္ဍာငွေ ယွမ် ၈၃၀ သန်း (၁၂၈ သန်း) ကျော်ကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
Joint Investment Partnership အဖြစ် Chun-men Group Limited, ChinaEV100, Tin Trust & STSTEC Fund, Patel Patio ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါ တယ်။
FAW ႏွင့္ Partnero တို႔သည္ အေစာပိုင္းက ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ကုမၸဏီႏွစ္ခုက ပူးတြဲတည္ေထာင္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ရက္မျပည့္မီ စမတ္ဓာတ္ခဲြခန္းမ်ား အဆင့္တိုးျမႇင့္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ Smart Network က သုေတသနျပဳခဲ့သည္။
Pateo ဟာ B wheel နဲ့ B + wheel financing အတွက် ၁၈ သန်း အကုန်အကျခံပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ကုမဏီက ရရှိလာတဲ့ ငွေပမာဏအများစုကို အသစ်ထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ အဓိကထားအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Pat Europe ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အဓိကအားဖြင့် Smart Car Information System ကို သုတေသနပြုကာ Main Stream Motor Group သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွမွာယူသည့္ Car IoT ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို
အာကာသသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၆.၃ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး အသံထက္ျမန္ေသာ အာကာသေလယာဥ္ တည္ေဆာက္မည္
တနင်္လာနေ့က အသစ်ထပ်မံကြေညာခဲ့တဲ့ တရုတ်အာကာသယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေး developer Space သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းက သူ့ရဲ့အသံထက်မြန်နှုန်းမြင့်မားတဲ့ အာကာသ လေယာဉ်တွေအတွက် ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၄၆.၃၀ ကျော်ကို မြှင့်တင်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
Space Transportation ဟု အမည္ေပးထားေသာ Beijing Gun Star Technology Co., Ltd ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုအရ တတိယအခ်ီၿပီးစီးပါက ေငြေၾကးယြမ္ သန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္.
သည်ရန်ပုံငွေကို Business Asia က တီထွင်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပြီး အသံထက်မြန်တဲ့ လေယာဉ်မောင်းနှင်မှု၊ အာကာသ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမဏီက တီထွင်ထားတဲ့ ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်း အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ယာဉ်တွေအတွက် လမ်းပြမြေပုံကို ရေးဆွဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အာကာသသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အစီအစဥ္သည္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ အႀကီးစားနည္းပညာျဖင့္ စမ္းသပ္ပ်ံသန္းမႈ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္သြားရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ၂၀၂၃ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုး ပ်ံသန္းခဲ့သည့္ အာရွရထားခရီးစဥ္၏ ေရွ႕ေျပးပံုစံအျဖစ္ အာကာသခရီးသြားယာဥ္ကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ စမ္းသပ္ပ်ံသန္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
အာကာသနှင့် ပတ်သက်၍ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
အာကာသ ပို့ဆောင်ရေးက သူ့ကိုယ်သူ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ တခုတည်းသော လုပ်ငန်းသုံး အသံထက် မြင့်မားတဲ့ အသံထက် မြန်နှုန်းမြင့် ပျံသန်းမှု ထုတ်ကုန်တွေကို ထုတ်လုပ်ပြီး နည်းပညာမြင့် ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ အသုံးချလာခြင်းက အသံထက် အသံထက် မြန်နှုန်းမြင့် ပျံသန်းမှု နည်းပညာကို ၂၁ ရာစု အာကာသ နည်းပညာသစ် “Higher Space နည်းပညာ” နဲ့ “ဧရာမ လုပ်ငန်းသုံး တန်ဖိုး” လို့ ခေါ်ပါတယ်။
မသဲစုNBase ဇီဝနည်းပညာကုမ္ပဏီ Pulse က ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ မြှင့်တင်မည်
သွေးခုန်နှုန်းဆိုင်ရာ ဆေးဝါးပုံရိပ် နည်းပညာ (Shanghai) Co., Ltd. သည် C-wheel financing ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ကျော်မြှင့်ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ သုတေသနနှင့် သုတေသန၊ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုနှင့် ထုတ်ကုန်များကို စီးပွားဖြစ် ထုတ်လုပ်နေသည်။
“Pulse Plan က ဒီေငြေၾကးကို စီးပြားျဖစ္သံုးဖို႔ အရွိန္ျမႇင့္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ ရမွတ္ကို Traffic Reserves (FFR) လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္”ဟု Pulse, Told Vertical media ရဲ့ Market Director Lin Xiajay က အခုလိုဇီဝကမ္ဘာ.
FFFR ဟာ သွေးပေါင်ချိန်နဲ့ သွေးတွင်း သွေးကြောကျဉ်းခြင်းရှိမရှိကို စစ်ဆေးဖို့ လမ်းကြောင်းကျဉ်းခြင်းကနေ အောက်ဆီဂျင်ပို့ဆောင်မှုကို အတားအဆီးဖြစ်စေပါတယ်။
ပဲမျိုးစုံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပုံရိပ်ဆိုင်ရာ နည်းပညာများ
Pulse Medicine Imaging Technologies ကုမၸဏီဟာ သူ႔ကိုယ္သူ တီထြင္ဆန္းသစ္ထားတဲ့ နည္းပညာကုမၸဏီတခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသလို ေသြးေၾကာက်ဥ္းတဲ့ လူနာေတြကို တိက်တဲ့ ေရာဂါရွာေဖြကုသမႈနဲ႔ အေကာင္းဆံုး ကုသမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးေနပါတယ္။ Pulse Medical University သည္ ရွန္ဟိုင္းရွိ Transport and Partnership တကၠသိုလ္တြင္ အ ျမန္ဆံုး ပံုရိပ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာအ တြက္ ရမွတ္ကို ေသြးစီးဆင္း ေရးဘဏ္ (FFR) က သတ္မွတ္ကာ ဦးေဆာင္ေန ျခင္းျဖစ္သည္။ ေသြးေၾကာဖန္တီးမႈ အေျခခံနည္းလမ္း (QFR) ႏွင့္ OCT အေျခခံနည္းလမ္း (OFR) တို႔သည္ ေသြးေၾကာက်ဥ္းျခင္း အတြက္ တိက်ေသာ အေျဖရွာ သည့္ အစီအစဥ္အျဖစ္ FFFFR က ေရာဂါရွာေဖြေရးႏွင့္ ေသြးေၾကာက်ဥ္းျခင္း အ တြက္ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္ေသာ လူနာမ်ားအ တြက္ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပး သည့္ အစီအစဥ္အျဖစ္ ႏွလံုးေရာဂါဆိုင္ရာ နယ္ပယ္တြင္ က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ ကုမဏီကလည်း သူ့ရဲ့မစ်ရှင်က ဆန်းသစ်တဲ့ဖြေရှင်းနည်းတွေ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနည်းပညာတွေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ တိုးတက်လာစေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
“China Venture Weekly”: Fintech, Biotech, Automation
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က Tencent ရဲ့ သတင်းမှာ ရှန်ကျန်းမှာ ငွေကြေးထောက်ပံ့တဲ့ နည်းပညာကုမဏီဖြစ်တဲ့ Shenzhen Tencent က ငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းအတွက် ဝိုင်းဝန်း ထောက်ပံ့ငွေ ဒေါ်လာ ၁၅ သန်းခန့်နဲ့ ဘေဂျင်းအခြေစိုက် ဇီဝနည်းပညာကုမဏီ EdiGene ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဝန်ထမ်းဟောင်း ၆၂ သန်းနဲ့ အလိုအလျောက်ကုမဏီကြီး Liaye က ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Tencent ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရး နည္းပညာကုမၸဏီ A+ Wheel Financing တရုတ်ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Shenzhen Tencent က ငွေရောင်အချက်အလက်ဆိုင်ရာ အကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Tencent Holdings နဲ့ High Finance Bench တို့က ငွေကြေးထောက်ပံ့တာတွေကို ယွမ် […]